सय स्थानीय तहले पठाए पदपूर्तिको पत्र, एकपटकलाई केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै पदपूर्ति ! – Public Health Concern(PHC)
सय स्थानीय तहले पठाए पदपूर्तिको पत्र, एकपटकलाई केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै पदपूर्ति !
काठमाडौं। केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दीमा एकपटकका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै पदपूर्ति गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा रिक्त दरबन्दीमा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै पदपूर्ति गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया थालेको हो । सोअनुसार विभिन्न सय वटा स्थानीय तहले रिक्त कर्मचारीको विवरणसहितको मागआकृति फाराम भरेर मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ तर प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्न र लोकसेवा परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तत्काल नसक्ने भन्दै केन्द्रीय सरकारले एकपटकका लागि स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ति प्रक्रियाको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
हाल देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा गरी झन्डै १६ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । प्रदेश सरकारले भने आफू मातहत रहेको रिक्त दरबन्दी विवरण पठाउन आनाकानी गर्दै आइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
देशभरका झन्डै १ सय स्थानीय तहबाट रिक्त दरबन्दीसहितको माग आकृति फाराम प्राप्त भएकाले ती विवरण छिट्टै लोकसेवा आयोगमा पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले स्थानीय तहबाट रिक्त कर्मचारीको विवरण आउने क्रम जारी रहेको र यो संख्या अझै बढ्ने बताए ।
मन्त्रालयले गत ८ वैशाखमा पहिलोपटक पत्र लेख्दै सबै स्थानीय तहसँग रिक्त दरबन्दीको विवरण माग गरेको थियो । त्यसयता दुईपटकसम्म पत्र लेख्दै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई २० वैशाखसम्म रिक्त कर्मचारीको दरबन्दी विवरण पठाउन ताकेता गर्दै आइरहेको छ ।
जनस्वास्थ्य सरोकार स्वास्थ्य लोकसेवा सामाग्री : GK Of Public Health(Series-3)
कर्मचारी समायोजनका कारण गत कात्तिकमा हुनुपर्ने लोकसेवा आयोगका विभिन्न विज्ञापनका परीक्षा हालसम्मै स्थगित हुँदै आएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले स्थगित हुँदै आएको लोकसेवाको परीक्षा छिट्टै सुचारु हुने बताए ।
‘हामी २० वैशाखदेखि नै स्थानीय तहबाट आएका रिक्त कर्मचारीको माग आकृति फाराम लोकसेवा आयोगमा पठाउन थाल्छौं,’ सचिव कोइरालाले राजधानीसँग भने । स्थानीय तहमा खरिदार, सुब्बा र अधिकृत गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीको पद रिक्त छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई नै दिए पनि हालसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन नसक्दा प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । लोकसेवा आयोग तयारी अवस्थामा केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले पनि सरकारले स्थानीय तहको माग आकृति फाराम पठाउनासाथ भर्ना प्रक्रिया थालिने स्पष्ट पारेको छ ।
स्थगित हुँदै आएको लोकसेवाको परीक्षा छिट्टै सुचारु हुन्छ
आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागार्इंले रिक्त दरबन्दीको माग फाराम आउनासाथ आयोगले भर्ना प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिए । सचिव गुरागार्इंले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्मका लागि समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने बताए ।
‘प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमै छ त्यसैले अहिले प्रदेश लोकसेवा गठन नभएकाले आवश्यक तयारी गरेका हौं,’ सचिव गुरागाईंले भने ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनमा ढिलाइ र पाठ्यक्रम निर्माणसमेत तत्काल हुन नसक्ने भएकाले प्रदेशले तत्काल कर्मचारी भर्ना गर्न कठिनाइ हुन सक्ने सचिव गुरागाईंको तर्क छ ।
प्रदेशबाट कुनै पत्र आएको छैन : आयोग
प्रदेश २ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा भर्ना प्रक्रिया नगर्न लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरिएको बताए पनि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले भने त्यस्तो प्रकृतिको पत्र आयोगमा प्राप्त नभएको जानकारी दिएको छ । ‘हामीलाई भर्ना नगर्नू भनेर कुनै पनि प्रदेशबाट कुनै पत्र आएको छैन,’ आयोगका सचिव गुरागाईंले भने ।
प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन भने लोकसेवा परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम निर्माणसमेत गर्न नसक्दा यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न र पहिलोपटक लोकसेवाको पाठ्यक्रम बनाउने काम यसै वर्ष गर्न कठिन हुने केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।राजधानी दैनिक
Tags: health infohealth loksewahealth news
Health Supervisors : PHASE Nepal (HA and Staff Nurses)
स्वास्थ्य लोकसेवा बिशेष सामाग्री : स्वास्थ्य सेवाका Key Points(Golden Points)-PHC PSC